Qodobka todoba: Cudurada 7 ee asal ahaan niyadjabsanaa waa mid caan ku ah - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Qodobka 7aad: Cudurada 7 ee asal ahaan niyadjabsanaa waa mid caan ku ah
Qodobka 7aad: Cudurada 7 ee asal ahaan niyadjabsanaa waa mid caan ku ah
TELES RELAY 21 February 2019
Caafimaadka iyo fayoqabka
Febraayo 14, 2019 09: 18 By Fabiosa
Waa maxay wuu xanuunaa Goorma nafta nafta ku haysaa? Dawooyinka casriga ah waxay si rasmi ah u aqoonsadaan cudurada 7 ee ay sababaan dareenka qarsoon ama dhaawacyada maskaxda.
Soo dhaweynta Instagram
Soo dhaweynta 11 Janv 2019 ee 9: 14 PST
1950, oo ah cilmi-nafsiga sare ee Mareykanka ee Franz Alexander markii ugu horeysay ee lagu sharxay koox gaar ah oo 7 cudurada nafsaaniga ah.
Tan iyo markii uu daabacay shaqadiisa Jaamacada Chicago, cuduradan waxaa hadda loo yaqaan naga magaca "Seven Chicago", ama inta badan, "Seven Sacred" ("Quduuska ah toddoba")
7 cudurada nafsaaniga ah iyo sababahooda
Публикация от Психолог Дмитрий Благов Москва (@psycholog_help_moscow) 11 SEN 2017 ee 10: 05 PDT
Xaaladda nafsaaniga ah ee cuduradaan waa maanta si rasmi ah loo xaqiijiyay. Waa maxay sababaha ugu waaweyn ?
1. Boogta Peptic
Sababta maskaxeed: Caajis aan naxariis lahayn, iyo sidoo kale gardarrada ama xanaaqa qof aan taageero helin xaalad qaas ah.
2. Xanuunka qanjirka 'Hemorrhagic'
Sababta maskaxeed: Qofka waa la xumeeyey waana uu noqday mid u go'an in aysan u muuqan in ay rajo ka qabaan.
Halkan ka daawo Asmaa Abdrahmanova (@shungitway_gtimecorparation_kz) 9 Okt 2018 ee 11: 54 PDT
Sababta maskaxeed: Ma aha qalbi-jebin in bukaankan qaba cudurkaan lagu sharraxay mid aan loo baahnayn. Cudurada maqaarka badankood waxay muujinayaan dhibaatooyinka xiriirka hooyada, oo ay ku jirto diidmada ama fiiro badan.
4. Neefta neefta
Sababta maskaxeed: Awood la'aanta inay neefsato waxay muujinaysaa cabsi qoto dheer oo nolosha ah. "Anigu si fiican uma neefsan karo" waa weedha ah in neefta ay sheegto inay muujinayso sida ay ugu adag tahay inay wax qabtaan.
Xilliga / Shutterstock.com
Sababta maskaxeed: Xannibaadda caadifadda. Sida caadiga ah, bukaanka qaba hypertension waxay dib u dhigi karaan waayo-aragnimadooda, oo ay iska dhaafaan dhibaatooyinkooda aan la xallin iyada oo ay ku dhufanayaan qoto dheer oo ay maskaxdooda ku jirto.
Sababta maskaxeed: Qanjirka 'thyroid' waa gaashaan dhab ah oo jidhka bini'aadamka ah. Waxay bilowdaa inay shaqeyso "wakhti dheeraad ah" markay xaaladdu noqoto hanjabaad iyo xad dhaaf.
Dadka qaba qanjidhada ballaarani waxay inta badan yihiin kuwo masuul ah oo qaan gaar ah. Cabsigooda miyir-qabka ahi waxay ku qabtaan si ay u xukumaan wax walba.
Sababta maskaxeed: Waqtiga intiisa badan, dadka qaba cudurradani aad bay muhiim ugu yihiin deegaankooda. Nasiib darro, ma aha oo kaliya waxay ku dhaqmeen mabaadi'da diimeed ee weyn, laakiin sidoo kale waxay ku dhisan yihiin fikrado kala duwan.
Cabsigelinta loola jeedo iyo cabsida qarsoodiga ahi waxay saameyn ku yeelataa habka burburinta, iyaga oo ka hor istaagaya inay cafiyaan, ka muujiyaan naftooda, ama u beddelaan hab nololeedkooda.
Taикация от Krista Reierson (@chalicegrove) 7 Janv 2019 ee 7: 46 PST
Dhakhaatiirta cilmi-nafsiga waxay aaminsan yihiin in sababaha cuduro badani ay ku dheehan yihiin dareenka iyo shucuurta aan waligood la kulmin. Haddii aad dhakhaatiir u aragtay sannado badan oo aan la helin natiijooyin la taaban karo, iskuday inaad u tagto ruux maskaxiyan ah.
Maqaalkan waxaa loogu talagalay oo kaliya ujeedooyinka macluumaadka kaliya. Ha isticmaalin is-daaweyn iyo, kiis kasta, la tasho bixiye caafimaad oo idman ka hor intaadan isticmaalin macluumaadka ku jira qodobkan. Guddiga Xukunka ma xaqiijinayaan natiijooyin kasta oonan masuul ka ahayn ciqaabta ama cawaaqibyada kale ee keenaya isticmaalka macluumaadka lagu bixiyey qodobkan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday mid hore FABIOSA.FR
Waxay tahay 19 sano jir waxayna sheegtay in ay uur leedahay cunuga Ciise, waxaan sameynaa ultrasound inta lagu jiro barnaamijka TV-ga
Caafimaadka: Goobaha UV: Khatarta kansarka maqaarka waa la caddeeyey
Kansarka naasaha: Xitaa ka dib markii sanadihii 75, khatarta ayaa weli jira
Macalinka dugsiga sare ee Bronx, 41, ayaa la xiray "si loogu beddelo sawirro ficil ah oo ku saabsan shabakada madow" - xnxx
Youtube: 17 DADKA UGU DAMBEEYAY HORUMARKA KA HOR
Morocco: Morocco waxay ku ballanqaadday wadashaqeyn saddex gees leh
UANL vs. Santos - Warbixinta Ciyaarta Kubadda Cagta - 3 April 2019 - ESPN
Congo - Brazzaville - Fursadaha Shaqada2
DADKA & LIFESTYLE16,371
Daawooyinka dabiiciga ah307
Galmada iyo xiriirada96
Video dheeraad ah3,284